Wararka Maanta: Talaado, Jun 29, 2021-Shirka golaha wadatashiga qaran ee arrimaha doorashada oo lagu wado in galabta lasoo gabagabeeyo
Madaxda ayaa maanta isla meel dhigidoona qorshaha amniga doorashada, soo gudbinta xubnaha guddiga dib u heshiisiinta gobolka Gedo iyo sameynta jadwalka cusub ee doorashooyinka.
Bilowgii hore ee shirka maanta, waxaa warbixino looga dhegaystay kooxda la taliyayasha farsamada ee arrimaha doorashooyinka.
Waa shirkii labaad oo ay yeeshaan golaha wadatashiga qaran ee Soomaaliya, tan iyo markii uu hoggaaminta doorashada la wareegay raysal wasaaraha Soomaaliya, Maxamed Xuseen Rooble.
Dhinaca kale, Madaxda Golaha Wadatashiga Qaran ayaa qaabilay wakiillo ka socday haweenka Soomaaliyeed oo ay horkaceysay wasiirka Haweenka iyo Xuquuqul Insaanka Marwo Xaniifa Xaabsade.
Waxay ka wada hadleen xaqiijinta qoondada haweenka ee 30% ee Goleyaasha Baarlamaanka Soomaaliya ee soo socda.
6/29/2021 10:30 AM EST